Inqwelomoya ye-Afrika eseMazantsi ngoku ine-United Airlines kunye neAirlink
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Inqwelomoya ye-Afrika eseMazantsi ngoku ine-United Airlines kunye neAirlink
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Le codeshare iyakwenza kubelula kubathengi bethu baseMntla Melika ukufikelela e-Okavango Delta, eChobe, eKruger National Park nakwiindawo ekuhlalwa kuzo ezizimeleyo zezemidlalo, eKapa, ​​eGarden Route, eSakopmund naseCopperbelt, phakathi kwezinye.
I-United Airlines kunye neAirlink zibhengeza isivumelwano sokuthengisa ukunceda abathengi baphonononge uMazantsi eAfrika.
Intsebenziswano entsha ibonelela abathengi ngokuhamba ngokulula kwiindawo ezingaphezu kwama-40 kuMazantsi eAfrika.
Abathengi be-United Airlines banokufumana okanye bahlawulele iikhilomitha kwiinqwelomoya zeUnited neAirlink.
Namhlanje, i-United Airlines kunye ne-Airlink, inqwelo moya yase Mzantsi Afrika, ibhengeze isivumelwano esitsha esiza kubonelela abathengi ngoqhakamshelwano phakathi kwe-US kunye ne-Afrika esemaZantsi kunayo nayiphi na imanyano yeenqwelo moya. Isivumelwano esitsha, esiphantsi kokuvunywa ngurhulumente, siza kunika indawo yokumisa enye ukusuka e-US ukuya kwiindawo ezingaphaya kwama-40 kuMazantsi e-Afrika. Ukongeza, i-United iya kuba yinqwelomoya yokuqala ukudibanisa inkqubo yayo yokunyaniseka kunye neAirlink, ivumela amalungu eMileagePlus ukuba azuze kwaye ahlawule iimayile xa behamba ngenqwelomoya yeAirlink. Le ntsebenziswano intsha iza kongezwa kubambiswano olukhoyo ne-United kunye nelungu le-Star Alliance.
“UManyano uyaqhubeka nokubonakalisa ukuzibophelela kwethu e-Afrika, siqala iinqwelomoya ezintathu ezitsha kwilizwekazi kulo nyaka kuphela kubandakanya inkonzo entsha eya eAccra, eGhana; ELagos, eNigeria naseRhawutini, eMzantsi Afrika, ”utshilo uPatrick Quayle, usekela-mongameli wothungelwano lwamazwe ngamazwe nemanyano lakhe United Airlines. “Kwaye ngoku ngesivumelwano sethu se-codeshare kunye Airlink - eyona ntsebenziswano ibanzi eMazantsi eAfrika - abathengi bazakukwazi ukuphonononga ngokulula iindawo ezingamabhakethi kwilizwekazi liphela kubandakanya unxibelelwano olulula neZambia, iZimbabwe kunye nangaphezulu. ”
United Airlines iye yaqhubeka nokwandisa umkhondo wayo ukuya eAfrika, ngenkonzo ethe ngqo kwiindawo ezine zaseAfrika. Kwangoko kulenyanga, i-United ibhengeze iinqwelomoya phakathi kweWashington, DC kunye neLagos eNigeria ezakuqala nge-29 kaNovemba, kuxhomekeke ekuvunyweni ngurhulumente. Kwangoko kulo nyaka, i-United yaphehlelela inkonzo entsha phakathi kweNew York / Newark neRhawuti, uMzantsi Afrika naphakathi kweWashington, DC neAccra, eGhana, ekulindeleke ukuba isebenze yonke imihla ngalo Disemba nangoJanuwari. Inkonzo ethandwayo e-United phakathi kweNew York / Newark kunye neKapa, ​​uMzantsi Afrika uzakuqhubeka kwakhona nge-1 kaDisemba.
“UMntla Melika yeyona ndawo ibalulekileyo yentengiso kwindawo zethu. Oku kwabelana ngeekhowudi kuya kwenza kube lula kubathengi bethu baseMntla Melika ukufikelela e-Okavango Delta, eChobe, eKruger National Park nakwiindawo ekuhlalwa kuzo ezizimeleyo zezemidlalo, eKapa, ​​eGarden Route, eSakopmund naseCopperbelt, phakathi kwezinye, ”utshilo. Airlink I-CEO kunye noMlawuli oyiNtloko, uRodger Foster. "Ngokunjalo, ukudityaniswa kweekhowudi kuthetha ukuba abathengi bethu kumazwe ali-12 ase-Afrika esiwasebenzayo ngoku, baya kuba nokufikelela okukhawulezileyo nokungagungqi kuyo yonke inethiwekhi yase-United."
Olu hlelo lutsha lokwabelana ngekhowudi luya kumiliselwa emva kokuvunywa kokugqibela ngurhulumente.